musha > traintip
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Europe ndiyo yakanakisisa wemapoka kuti kudanana guta uchapukunyuka. zvisinei, inzvimbo huru, uye yaungada kuderedza pasi. sezvinei, pane zvakawanda nezvako Germany, kunyanya maguta ayo uchidanana nemisha. Wadii kutora mudiwa wako…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Easter Mhemberero mu Europe zvinosiyana munyika nenyika uye kubva mumaguta. Ndicho chimwe chezvinhu zvinokosha uye mukuru mitambo Church yechiKristu. Isita ndiye kupemberera kumuka kwaJesu Kristu kubva paguva. Zuva rekupemberera Isita…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Kuenda Europe ari rwaifadza vazhinji kudaro. Uye kana uri rombo rakanaka zvokuti mukana tick kuenda ichi kure yenyu Mugomo mazita uone zvose zvakanakisisa nzvimbo Europe, iwe unoda kuita kuti chiitiko chisingakanganwiki se…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Vatariri nechitima kunogona kuva chimwe chezvinhu yokumbofaranuka uye kunakidzwawo nzira kuti famba. Unofanira kuziva kuti zvakanakisisa rwendo rwenyu uye ngwara. Kuva zvakanaka vakarongeka uye achiziva zviri kuitika refu nzira kune kuita…